Angixhumi ekukhulelweni kwabafundi - Motshekga | isiZulu
Angixhumi ekukhulelweni kwabafundi - Motshekga
Kuwumsebenzi omkhulu ukukhulelwa kwabafundi
Imizamo yokwehlisa ukukhulelwa kwentsha e-KZN
Kwehlile ukukhulelwa kwentsha: inhlolovo
Johannesburg - UNgqongqoshe wezoMnyango wezeMfundo eyisiSekelo u-Angie Motshekga uthi ukukhulelwa kwezingane zisekole nothisha abafika bephuzile esikoleni akuyona inkinga yoMnyango wakhe, kubika iSowetan.
Ekhuluma eDe Aar, eNorthern Cape lapho bekuyiswe khona iPhalamende ebantwini, uMotshekga uthe abazali akumele basole uMnyango wakhe ngodaba oseluxakile lokunyuka kwezinga lokukhulelwa kwezingane zesikole.
Uthi lokhu kungenxa yokuthi abafundi abalwenzi ezikoleni ucansi.
"Ukukhulelwa kwabafundi kuyinkinga ethwalwa iyiswe ezikoleni isuka emakhaya nasemiphakathini," kusho uMotshekga.
"Engikwaziyo ukuthi abalwenzeli ezikoleni ucansi, kepha bazitika ngalo emakhaya. Lokhu kuyisihlava esimbi impela njengoba manje sekuyinkinga yami. Asibanikezi abafundi imibhede, kepha sibanika amapeni nezincwadi."